musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Pemberera Mazororo Anofara kuThe St. Regis San Francisco
Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mazororo atouya kwatiri, uye The St. Regis San Francisco yakaronga hurongwa hwemafaro kune avo vari kutsvaga kufamba kana kungotora chikamu mukudya kwehumwari… kana zvese! Wadii kuronga rwendo rwekuenda kuguta regoridhe pedyo nebay, ita kutenga kwako, uye kufara paunenge uripo?
The St. Regis San Francisco iri munzvimbo huru yekutenga nekudyira uye kungofarira zvemazororo.
Iri zvakare padyo padyo nehoridhe skating rink uye mamuseum epasi rose.
Nechipo cheBloomingdales $ 100 chitupa chinosanganisirwa muHoliday Shopping Package, ruzivo rwekutenga rwunobva rwaita nani uye nani.
San Francisco's premier kero yeumbozha uye isina nguva yekunaka, Iyo Regis San Francisco, iri munzvimbo yepamusoro yedhorobha reSoMa nharaunda uye iri padhuze nemamyuziyamu emhando yepamusoro, zororo rechando rink, kutenga, nezvimwe zvakawanda, The St. Regis San Francisco ndiyo nzvimbo yakanaka kune vashanyi vari kutsvaga isingakanganwiki uye inoshamisira. chiitiko chezororo.
Mwaka uno wezororo, hotera yakasarudzika iri kupa:
Vaenzi vepahotera vanogona kubhuka zvakakosha Bloomingdales Shopping Package iri kuwanikwa kusvika Zvita 28, 2021. Mupasuru iyi mune pekugara zvakanaka kwehusiku mune imwe yedzimba dzevaenzi dzakagadziridzwa nguva pfupi yapfuura, chitupa chezvipo cheBloomingdales chemadhora zana, 100% kubva kuBloomingdales saving card, kukoka zveshopper style, Bloomingdales zvekufambisa. mabhegi, bhegi remukwende uye bhegi rehembe), uye inokwana yekupakata kwehusiku. Mitengo inotangira pa $15.
Holiday Dining Zvakaitika
Zvakavanzika, mukamuri yekudyira zviitiko, zvinosanganisira 4 kosi Prix Fixe dinner menyu inowanikwa kune vashanyi paKutenda neKisimusi Evha. Vafambi vanogona zvakare kushanyira imba yechina yepasi Vitrine yemutambo 3 kosi Prix Fixe lunch menyu ine waini pairi mazororo ese. Uye zvakare, iyo Vitrine ichave yakavhurika yekudya kwekudya kwemangwanani paKutenda uye Evha yeKisimusi uye ichaita brunch inoyevedza, yakazara neMimosa uye Bloody Mary activation paZuva reKisimusi.
Iyo Regis San Francisco inopa 260 makamuri uye masutu, ese achangobva kufungidzira nemukurumbira weToronto-based design firm Chapi Chapo. Kugadzira patsva kwakanangana nekunatsiridza The St. Regis San Francisco's 15,000 square feet dzekusangana nenzvimbo dzezviitiko, kugadzira nzvimbo dzakanatswa, dzakagadzika, uye itsva dzakagadzirirwa kufambisa nhaurirano nekudyidzana.
The St. Regis San Francisco yakavhurwa muna Mbudzi 2005, ichiunza humbowo hutsva hweumbozha, basa risingachinji, uye runako rusingagumi kuguta reSan Francisco. Chivako chine nhurikidzwa makumi mana, chakagadzirwa naSkidmore, Owings & Merrill, chinosanganisira 40 dzimba dzekugara dzinokwira nhanho gumi nepfumbamwe pamusoro pe102-makamuri St. Regis Hotel. Kubva pane zvechinyakare sevhisi, “kutarisira” kuchengetwa kwevaenzi uye kudzidziswa kwevashandi kwakanaka kune zveumbozha uye dhizaini yemukati naChapi Chapo wekuToronto, The St. Regis San Francisco inopa chiitiko chisingaenzaniswi chemuenzi. The St. Regis San Francisco iri pa19 Third Street. Nhare: 260.